တန်ရာ တန်ကြေး (၂) ဇာတ်သိမ်းပိုင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » တန်ရာ တန်ကြေး (၂) ဇာတ်သိမ်းပိုင်း
တန်ရာ တန်ကြေး (၂) ဇာတ်သိမ်းပိုင်း
Posted by etone on Jun 2, 2011 in Short Story | 17 comments
သူက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပြုံးပြကာ သာမန်မိတ်ဆွေ တယောက်လိုပင် ကျွန်မကို ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်…. ။ သူ့ကို နေရာထိုင်ခင်းပေးတော့ ….. တံခါး အကွယ်မှ …. တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုပါ အထဲဝင်ခဲ့ရန် သူခေါ်ခဲ့သည်….. ။ ကျွန်မဧ။် ရင်ခုန်စရာကောင်းသော ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခွဲခွာနေရသော အချစ်ဦးနှင့် ပြန်လည်တွေ့ဆုံချိန်လေးတွင် အဘယ်ကဲ့သို့ မိစ္ဆာမက ဖျက်လိုဖျက်ဆီး ပြုလိုက်ပါသနည်း နားမလည်ခင် …. လွတ်နေသော သူ့ဘေးသို့ ကျမထက် ငါးနှစ်ခန့်ငယ်သူ အမျိုးသမီးတယောက် ကပ်ထိုင်လိုက်သည်….။
နေ့ခင်းကြောင်တောင် မိုးကြိုးကြီး ဆယ်စင်း ပစ်ခံရသလို အေးစက်တောင့်တင်းကာ နှလုံးသွေးများ အေးစက်တော့မတတ် ဆွံ့အသွားခဲ့သည်… ။ သူတို့ နှစ်ယောက်ရှေ့မှ ကျွန်မ အခိုးငွေ့ အဖြစ် ဖြင့် …ပျောက်ကွယ်သွားချင်မိသည်…. ။ မျက်တောင်ရှည်ကြီးများ ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုပ်ပြီး ကြွေကျတော့မတတ် မျက်ရည်ဥများကို ထိန်းကာ လာရင်းကိစ္စကိုမေးတော့…. ဖိတ်စာလာပို့တာတဲ့ရှင်….
သူ… ကျွန်မကို ဘယ်လောက်တောင် နှိပ်စက်ဥိးမှာလဲ ….။ ဘာခံစားချက်မှ မရှိ ..သံယောဇဉ် မရှိသူတယောက်လို ကျွန်မကို အဆက်သွယ်တွေဖြတ် ပစ်ထားပြီးတာတောင်… ယခု ဖတ်စာပို့ဖို့ သက်သက် ကျမရုံးခန်းအထိ လာခဲ့ရက်တယ်နော် …. ။ တကယ်ဆို မသိသလိုပဲ နေလိုက်ပါတော့လား …. ။ …..
သူ …. သူကတော့ သာမန်မိတ်ဆွေ တယောက်ကဲ့သို့ပင် ကျမထံ ဖိတ်စာ လာပေးပြီး သူ့ မင်္ဂလာပွဲသို့ ဆက်ဆက် တက်ရောက်ရန် တောင်းဆိုပြန်သည်… ။ သူ့ဘေးတွင် ပါလာသော သတို့သမီးလောင်းကလည်း အလိုက်မသိစွာ ကျွန်မရှေ့တွင်ပင် အနေထိုင်ရဲတင်းလွန်းလှသည်…. ။ တစ်ချိန်က ကျွန်မချိတ်တွဲခဲ့ဖူးသော … သူ့လက်မောင်းများကို ကောင်မလေးက အစားထိုး ချိတ်တွဲကာ ကလေးတယောက်လို ပြန်ကြရန်ပူဆာနေသေးသည်…. ။ သူကလည်း …. ကောင်းမလေး ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်စေမည်ဟု အသံတိတ်….. အလိုက်သိစွာ ခေါင်းငြိမ့်ပြရင်း …. ကျွန်မကို မင်္ဂလာဆောင်လာခဲ့ရန် ထပ်ဖိတ်ပြန်သည်…. ။ ….. ကျွန်မရင်တွေ ကွဲထွက်မတတ်ကြေကွဲရသည်….။ ဒီအသက်ရွယ်ရောက်မှ အော်ဟစ်ငိုယိုလို့ကလည်း လူကြားမကောင်းပေ…. ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ဒင်းတို့ နှစ်ယောက်စလုံးကို မောင်းထုတ်ပစ်လိုက်ချင်မိသည် …. ။ သို့သော် …. ကျွန်မဧ။် ဂုဏ်သိက္ခာ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ရှိသေးသဖြင့် …. အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားမျိုသိပ်ခဲ့ရသည် …. ။
သူ …. ကျွန်မအပေါ် ဆက်ဆံမှူတွေ အေးခဲသွားသလောက် …. တခြားကောင်မလေးနှင့်တော့ …. နွေးထွေးစွာ ဆက်ဆံတတ်သူ…. ။ ကျွန်မကို အဆက်သွယ်ဖြတ်သစ်စိမ်ချိုး ချိုးထားခဲ့ရက်သလောက် …. သူ့ သတို့သမီးလောင်းအတွက် … အရံသင့်ရှိတဲ့သူ …..။ သူ… ကျွန်မကို မိန်မရိုင်းအသွင်ပြောင်းအောင် တွန်းပို့တဲ့သူ ….. ။
အိပ်ယာ နိုးနိုးချင်း မျက်နှာ ထသစ်သော အကျင့် ရှိသော်လည်း … ဒီနေ့ ကျွန်မစိတ်တွေ လေးလံနေမိသည် …. ။ ကျွန်မနှင့်သူဧ။် ဇာတ်လမ်းသည် အဆက်သွယ်ပြတ်သွားသည့်နောက်ပိုင်း ပြီးဆုံးသွားပြီဟု ယူဆရသော်လည်း စိတ်ထဲကြိတ်မျှော်လင့် နေမိသေးသည်…. ။ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လာခဲ့ဖို့ ပြောချင်နေခဲ့သည်… ကိုယ့်မာနနှင့်ကိုယ်မို့ …အသက်ရှင်နေသရွှေ့ပြန်တွေ့နိုင်တာပဲဟု ထင်မှတ်ထားသောလည်း …. ကြေခွဲခန်းဖြင့် ဇာတ်သိမ်းရမည်ဟု ဘယ်သောအခါကမှ မယုံကြည်ခဲ့ပေ…။ အတွေးများကို ဖြတ်တောက်ပြီး မင်္ဂလာဆောင်သွားလျှင် ပြင်ဆင်ရသည်… ။
ယခုမင်္ဂလာပွဲသည် ကျွန်မတို့အတွက် နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်မည်ကို ကောင်းစွာနားလည်ထားသည်…. မပိုင်ဆိုင်ရတော့ပေမဲ့လည်း သူ့အတွေးထဲတွင် ကျွန်မဧ။် နောက်ဆုံးပုံရပ်အချို့ မှတ်မိနေစေရန် အလှဆုံးဖြစ်အောင် ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့ခဲ့သည်….. ။ ၀တ်နေကျ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံမျိုးမဟုတ်ပဲ … ရိုးရာ ပိုးထည်ကို ချိတ်ဖြင့်တွဲဖက်ဆင်ယင်ခဲ့သည်… ။ ပန်းပန်သော အလေ့ထမရှိသော်လည်း ပန်းတွေဝေနေအောင်ပန်ခဲ့ပြန်သည်… ။
ကျွန်မနောက်မကျပါဘူးနော်ဟု သူ့ကိုတွေ့တွေ့ချင်း ကျမပြုံးရင်း နှုတ်ဆက်လိုက်သည် …. ။ ရွှန်းစိုနေသော မျက်လုံးများဖြင့် သူက ဒီနေ့ အရမ်းလှတယ်တဲ့လေ….။ ကျွန်မတို့တွဲခဲ့သည့် သက်တမ်းတလျှောက်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ဤသို့ကြားရခြင်းဖြစ်သော်လည်း … အံ့သြသော အမူယာ လုံးဝမပြပါပဲ သူ့ကိုသာ မျက်နှာမလွှဲစတမ်း ကြည့်နေမိသည်… ။ သူလည်း အနေရခက်သည်ထင်သည်… ကျွန်မအကြည့်တွေကို ရှောင်လွှဲရန်ကြိုးစားနေသည်…. ။
ကျွန်မသိပါတယ် … ရှင် အရည်ပျော်နေပါပြီ…။ကျွန်မဒီလို စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်နေနိုင်ဖို့ မျက်ရည်များစွာနဲ့ အချိန်အတော်ကြာကြေကွဲစွာ လေ့ကျင့်ခဲ့ရတာလေ… ဒီလောက်တော့ ရှင်ပေးဆပ်ရမှာပေါ့… ။ စိတ်ထဲတွင် ကြိမ်းဝါးရင်း အားရသည့် အပြုံးဖြင့် ကြည့်နေမိပြန်သည်… ။
ထိုစဉ် သတို့သမီးက ပွဲထွက်တော့မည်ဟု သူ့လက်မောင်းကို ဆွဲကာလာခေါ်သွားသည်….။ ကျွန်မလည်း စက္ကန့်ပိုင်းသာ အောင်ပွဲခံခွင့်ရသဖြင့် သတို့သမီးအပေါ် မုန်းတီးစိတ်ပိုလာမိသည်… ။
မင်္ဂလာလျှောက်လမ်းဆီသို့ တရွှေ့ရွှေ့ လျှောက်လှမ်းလာသော ဒင်းတို့ ဇနီးမောင်နှံကိုကြည့်ရင်း ကျွန်မရင်တွေ ကြေလုမတတ်ခံစားရသည်… ထိုသတို့သမီးနေရာတွင် ကျွန်မသာ ဖြစ်ခဲ့သင့်တာပါ ….. ။ သူ့ကို ဆုံးရှုံးရပြီဆိုသော အသိတို့ကြောင့် မျက်ရည်များစို့နင့်လာသည်… ဧည့်သည်များရှိသဖြင့် မျက်ရည်မကျယုံသာ ထိန်းထားခဲ့သည်…. ။ ကျွန်မအတွက် မင်္ဂလာပွဲ တက်ရောက်မိခြင်းသည် နောင်တ အထပ်ထပ်ရစေသော ကိစ္စဖြစ်နေတော့သည်…. ။ အခိုးငွေ့ဖြစ်သွားပြီး ပျောက်သွားပါစေဟု အကြိမ်ကြိမ် ဆုတောင်းမိသော်လည်း …လက်တွေ့မဟုတ်သော တကယ့်ဘ၀တစ်ခုတွင် သူကျွန်မကို ထားခဲ့လေပြီ…. ။
အတွေးတို့က ရောက်ယက်ခတ်နေသည်…. ။ သူ … . ကျွန်မကို ထားခဲ့ရက်သည်… ။ သူ …….ကျွန်မအချစ်ကိုလှည့်စားခဲ့သည်… သူ…သူ…သူ… ကျွန်မ ဒေါသစိတ်တွေ ထိန်းမရတော့ချေ… မျက်လုံးများပြာလာကာ ရင်ထဲမောလာသည်… ကြပ်လာသလိုလို အသက်ရှူမ၀သလိုလိုဖြစ်လာတော့သည်… ထိုအချိန်တွင် မင်္ဂလာ သတို့သားနှင့် သတို့သမီးတို့မှာ စင်ထက်တွင်နေရာယူပြီးကာ မင်္ဂလာကိတ်မုန့်ခွဲရန်ပြင်နေကြသည်….။
ဒေါသစိတ်တို့ ဆူပွက်ကာ ကျွန်မခဏတာ အသိစိတ်ပျောက်သွားသည်… ရင်ထဲ မောပန်းနေချိန်မှာတွင်ပင် … သတို့သား၊ သတို့သမီးတို့ ကိတ်မုန့်ခွဲရာ နေရာသို့ ဒရကြမ်းရောက်သွားပြီး …. ကိတ်မုန့်လှီးသော ဓါးဖြင့် ….. တစ်စုံတစ်ယောက်သော သူဧ။် ရင်ညွှန့်ဆီသို့ အားကုန်ထိုးစိုက်လိုက်သည်….. ။
အောင်နိုင်သူတယောက်လို ကျွန်မပြုံးကာ ခန်းမထဲက ကျွန်မပြေးထွက်ခဲ့သည်…. အဖြစ်ပျက်မှာ မြန်ဆန်လွန်းသဖြင့် အားလုံး မင်သက်ငေးမောနေတုန်း …. ဟိုတယ် ၀ရံတာမှတဆင့် …….ကျမခုန်ချလိုက်တော့သည်….။
ဒီမိန်းမကွာ သူများ မင်္ဂလာပွဲကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးနဲ့….။သေတောင် နည်းသေးတယ်
ဘယ်လိုမိန်းမလည်းမသိဘူး အူကြောင်ကြောင်နဲ့ အရူးနဲ့လည်း မတူပါဘူး ၊ နည်းနည်း လွတ်နေတာဖြစ်မယ်…။
ဒါသတို့သားရဲ့ မယားကြီးတဲ့ပြောကြတာပဲကွ…. ။
သနားပါတယ်ဟယ် …. ရုပ်ကလေးလှသလောက် အဖြစ်ကလည်း ဆိုးလိုက်တာ…
ကျွန်မ ရုပ်ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီး ဝေဖန်နေခြင်းဖြစ်သည်….. တစ်ယောက်တပေါက်ဝေဖန်သံတွေကို ကြားနေရသော်လည်း … တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပေ…. ။ ဘာဖြစ်ဖြစ် … ကျွန်မကျေနပ်ပါသည်….သူ့ဆီမှာ တန်ရာ တန်ကြေး တောင်းခဲ့ပြီးသောကြောင့်သာ ဖြစ်သည် …….။
အချစ်ကြီးလို့ အမြတ်ကြီးသူ ဆိုတော့ စာလုံးပေါင်းများနေတာလား အဓိပါယ်က အမြတ်များတာကို ပြောချင်တာလား …
ဟီးဟီးဟုတ်တယ်… ။ စော်တီးနော် မဝေ
စာလုံးပေါင်းမှားနေတာ … ပထမတပုဒ်ကတည်းကမှားတာ ဒုတိယတပုဒ်တင်တော့ ပြန်ကူးလိုက်လို့ နှစ်ထပ်ကွမ်းဖြစ်သွားတယ်…။
ပို့စ်နှစ်ပုဒ်စလုံး အကြိမ်ကြိမ် အက်ဒစ်ပြန်လုပ်ပြီးမှ မြင်တဲ့အမှားမို့လို့ … ဗျို့ ရုပ်က္ခစိုးရေ… အဲ..မှားလို့…. သဂျီးရေ အမြင်မတော်လျှင် ပြင်လိုက်ပါဗျို့ …
ှStory တစ်ခုလုံးနီးပါး Snowy ရဲ့ခံစားချက်နဲ့တူတယ် အဖြစ်အပျက်လည်းဆင်ပါတယ် … ဒါပေမယ့်ဇာတ်သိမ်းပိုင်း သူ့ကို ဓါးနဲ့ထိုးသတ်ပြီး ကိုယ့်ကို ကိုယ်တော့မသတ်သေချင်ဘူးနော် … အဖန်ငါးရာငါးကမ္ဘာ တဲ့ကြောက်တယ်
ဖက်နေရင်းနဲ့ မျက်ရည်ဝဲမိတယ် … အသဲကွဲတဲ့ရောဂါ ခံစားဖူးသူတိုင်းနားလည်နိုင်မယ်ထင်တယ်
ချစ်တဲ့သူတိုင်း ပေါင်းစည်းနိုင်ကြပါစေ …….
snow အဖြစ်နဲ့ တူတယ်တဲ့လား … ဒါဆို အတော်ခံစားခဲ့ရမှာပဲနော်… ။စိတ်မကောင်းပါဘူး ။
etone ကတော့ရေးတာ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းလေးပါ… ။ ဒါပေမဲ့ တကယ့်ကို ခံစားပြီးရေးခဲ့တာ …ရေးနေရင်းနဲ့ ရင်ဘတ်တွေ အောင့်လာတဲ့အထိ ဇာတ်ကောင်နေရာကနေခံစားခဲ့တယ်လေ… ။ ရေးလိုက် မျက်ရည်ဝဲလို့ ခဏရပ်ထားလိုက် … ရင်ဘတ်အောင့်လို့ နားလိုက်နဲ့….စာတိုလေးကို လေးရက်အချိန်ယူရပါတယ် … ။ အရှည်ကြီးဆိုလည်း ဖတ်ရတဲ့လူ ပျင်းတယ်လေ…ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အဲ့လို အရှည်ကြီးဆို ဖတ်ရတာ ပျင်းလို့ … ။
ချစ်သူနဲ့ ကွေကွင်းတဲ့ဒုက္ခ ၊ အချစ်တွေ အရူးလုပ်တာခံရတဲ့ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ထက်တဲ့ မိန်းမတယောက်ရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ …. ၊ ချစ်လွန်းအားကြီးလို့ အမျက်ကြီးပြီး… တဒင်္ဂအတွင်းဖြစ်လာတဲ့ စိတ်ကို မထိန်းမိပဲ လုပ်မိသွားတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ရေးခဲ့တာပါ… ။ အစကတော့ သူက သတ်ဖို့ မရည်ရွယ်ပါဘူး … ခံနိုင်ရည်စွမ်း မရှိတဲ့နောက်ဆုံး ယုံကြည်ရာကိုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်…သူမရှိပဲ နေတာထက် ၊ သေရတာ ပိုကောင်းမယ်တွေးမိပြီး အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာသိလျှက်နဲ့ အဆုံးစွန်ထိ လုပ်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပါ… ။
နှစ်ဦးနှစ်ဘက်ချစ်ကြသူတိုင်း ပေါင်းနိုင်ကြပါစေနော် ။
အင်း …ဒါ့ကြောင့် ပြောကြတာ အမှောင်တကာ အမှောင်မှာ ဒီအမှောင်က အမိုက်ဆုံးတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အချိန်ကာလ ကြာလာတာနဲ့ အမျှ တခါတရံ သတိရလို့ ပြန်တွေးမိတဲ့အခါ ပြုံးမိရုံထက် မပိုနိုင်ပါဘူး။ အီးတုံးရေ ဖတ်နေရင်းနဲ့ သူ့အစား မတန်လိုက်တာလို့ တွေးမိတယ်။ ကိုယ့်က လှလည်းလှပြီး အစွမ်းအစရှိတဲ့ မိန်းမပဲ တခဏ ဒေါသကိုသာ ထိန်းနိုင်ရင် သူ့ထက်သာပြီး သူ့ထက် ကိုယ့်အပေါ် ကြင်နာမဲ့သူ တွေ့နိုင်မှာမို့ အဲဒီအခါမှ သူ့ရှေ့မှာ တွဲလျှောက်ပြီး လွတ်တဲ့ငါး ကြီးစေချင်တာ။ ဒါကတော့ မမှီ စိတ်ပေါ့ ။ ဆရာမ မစန္ဒာ ရေးထားတဲ့ “လှရ်ျ မလှသူ နှင့် မလှရ်ျ လှသူ ” လိုမျိုးလေး တပုဒ်လောက်ရေးဦး။ စိတ်ကူးကောင်းတယ် ။ မမှီက အဲဒီလိုမျိုး စိတ်ကူးပြီး မရေးတတ်ဘူး။ ရေးချင်ပေမဲ့ မရေးကို မရေးတတ်တာ။
မမှီ ရေ သူ့ထက်သာပြီး သူ့ထက် ကိုယ့်အပေါ် ကြင်နာမဲ့သူကိုတစ်ချိန်ကျတွေ့ရင် … သူ့ရှေ့ မှာတွဲပြတယ်ဆိုကတဲက .. သူ့အပေါ်ကိုယ်ထားတဲ့ စိတ် ဒါမှမဟုတ် အချစ်တွေ မကုန်သေးတာလို့ Snow ယူဆ တယ် … အချိန်ကြာလာရင်တစ်ကယ်ကော မေ့နိုင်ပြုံးနိုင်ပါသလား?
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေလို့… အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာဆိုတာ.. ပေါက်တတ်ကရတွေပါကွယ်..။
ကိတ်မုန့်လှီးတဲ့ဓါးဆိုတာမျိုးက..တုံးတုံးကြီးတွေ.. မိန်းမအားလောက်နဲ့ရင်ဘတ်လောက်စိုက်ချရင်.. မသေလောက်ဘူး..။
နောက်တခုက.. ဟိုတယ်ဝရံတာက ခုန်ချလို့.. ထမီကျွတ်ပြီးမှ အောက်ကျရင်ဘယ်လိုလုပ်မလည်း..
( နည်းနည်း.. စိတ်တင်းတွေဝင်နေလို့..လျှော့ချပေးတယ်မှတ်ပါနော..။ နောက်တာပါ )
သဂျီးကလည်း ပြောတော့မယ်… ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မငြင်းချင်တော့ပါဘူး ။
ကိတ်မုန့်လှီးတဲ့ ဓါးနဲ့ ထိုးတယ်ပဲပါတယ်လေ… သေလားရှင်လား ဆက်ရေးမထားပါဘူး … အများစုကတော့ သေတယ်လို့ပဲ ယူဆပြီး ကျော်ဖတ်မယ်ထင်တယ်နော် ရေးသာရေးရတာ..ကိတ်မုန့်လှီးတဲ့ဓါးက အခုအများစုသုံးနေတာ ပလတ်စတစ်သံလျှက်လိုဟာမျိုးဖြစ်နေပြီ ဟီးဟီး ။
မသေခင် ..ထမိန်ကျွတ်သွားတော့လည်း နောက်ဆုံးပရိုမင်းရှင်းလုပ်တယ်လို့ ပဲ သဘောထားပါတယ် ။ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းမို့ဟာကွက်လေးတွေတော့ရှိနေတယ် … ။
အသဲကွဲဖူးသူတိုင်းအတွက် ခံစားဖူးသူတိုင်း ဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာကိုတော့ကြောက်ကြမှာပါ .. ချစ်သူက အကြောင်းပြချက်မရှိ ထားခဲ့လို့ အသဲကွဲနေပါတယ်ဆိုမှ နောက်ထပ် ဝေဒနာတိုးအောင် မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာပါ လာပေးတယ်ဆိုတော့ …….
အဲ့ဒါကြောင့်မို့ အဲ့ဒီကောင်ကို ဓါးနဲ့ ထိုးခိုင်းလိုက်တာ.. ဒါမှ တန်ရာတန်ကြေးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ လိုက်မှာလေ ။
အသဲကွဲတာ အရမ်းခါးတယ်။ အခါးတကာ့ အခါးတွေထဲမှာ အခါးဆုံး။
သားသားကြောက်ကြောက် ဒါကြောင့်တစ်ယောက်ထဲဘဲယူထားပါတယ်၊
တန်ရဲ့လား etone ရယ်။ ကိုယ့်ကို မချစ်တော့တဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက် တစ်ဘဝလုံး အဆုံးခံရတယ်လို့။ ကိုယ့်မိဘ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေကို ထည့်စဉ်းစား ကြည့်ပါဦး။
ကျမကြိုးစားခဲ့ပါသည်…. ဆိုတဲ့ မာန်တွေ ပျောက်ကုန်ပြီလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့လူအတွက်ရော၊ ကိုယ့်ကို မချစ်တဲ့လူအတွက်ပါ ကောင်းကောင်းအသက်ရှင် နေထိုင်သွားသင့်တယ်။ ကိုယ်ကောင်းကောင်း အသက်ရှင်နေထိုင်သွားတာဟာ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့လူတွေကို စိတ်ချမ်းသာစေတယ်။ ကိုယ့်ကို မချစ်တဲ့လူတွေကိုလည်း တွန်းလှန်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်။
ဆရာတယောက်ပြောဖူးတယ်၊ သူ့သူငယ်ချင်းတဦး ရည်းစားနဲ့ကွဲတော့ ပိုသာတယ်လို့ထင်တဲ့ ကောင်မလေးတဦးနဲ့ ရည်းစားဟောင်းရှေ့မှာ တွဲပြတယ်။ အရင်ရည်းစားက ဘာမှမလုပ်ပါဘူး၊ တချက်လေးစောင်းကြည့်ပြလိုက်တာ တဘဝလုံး နောင်တနဲ့ဇာတ်သိမ်းသွားသတဲ့။ (ကိုအောင်ပု သူ့ရည်းစားဟောင်း ဖြိုးနဲ့ စကားများ၊ နောက်တယောက်ကိုတွဲပြ၊ ဒါနဲ့ဖြိုးက တချက်လောက် မျက်စောင်းထိုးလိုက်တော့ နောင်တကြီးစွာနဲ့ လိင်တူလူတိမ် ပို့စ် ချက်ခြင်းကောက်ရေးသလိုမျိုး ဖြစ်မှာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့လည်း ပုရယ်
သူအသိတဦးကြတော့ ဂလိုပဲ ကောင်မလေးနဲ့ရန်ဖြစ်၊ နောက်တယောက်ရှာ၊ မကြာခင် မင်္ဂလာဆောင်တယ်။ ရည်းစားဟောင်းက မင်္ဂလာပွဲကိုလာတယ် (လက်ဖွဲ့ပေးမပေးတော့ မသိဘူး)။ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲမှာ ဆေးတွေမူးနေတယ်တဲ့။ ပြီးတော့ သူ့ကိုပြောတယ်၊ ငါကနင့်ကို သင်ခန်းစာရအောင်ဆိုပြီး ခဏဖြတ်လိုက်တာ၊ နင် လုပ်ရက်တယ်လို့ ပြောတယ်တဲ့)
အီးတုံးနောက်ထပ် ဇာတ်လမ်းရေးနိုင်အောင် ကုန်ကြမ်းပေးတာပါ။
ကိုကြောင်ကြီး ဇာတ်လမ်းကိုပြောပါဆိုရင်တော့ ချစ်သူနဲ့ကွဲပြီးတော့ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ အာကာသလွန်းပျံယာဉ် တစင်ပေါ်ခိုးလိုက်သွား၊ ပလူတိုဂြိုလ်ကိုရောက်၊ ဂြိုလ်သူမအလန်းလေးနဲ့တွေ့၊ ဂြိုလ်သားဆိုတွေနဲ့ချပြီး ဂြိုလ်ကြီးကိုကယ်တင်၊ ပလူတိုဂြိုလ်ဘုရင်ကြီးဖြစ်၊ နောက်တော့ ကမ္ဘာဂြိုလ်အပါအဝင် စတြာဝဠာတခုလုံးကို သိမ်းပိုက်၊ စတြာဝဠေးမင်းဖြစ်၊ နောက်ဆုံတော့ သုဂတီဘုံစံ အဆင့်ဆင့်စံစား၊ တရားရပြီး သံသရာမှ လွတ်မြောက်။ ဒန် တန့် တန်…
ကိုကြောင်ကြီး ဇာတ်လမ်းကိုပြောပါဆိုရင်တော့ ချစ်သူနဲ့ကွဲပြီးတော့ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ အာကာသလွန်းပျံယာဉ် တစင်ပေါ်ခိုးလိုက်သွား၊ ပလူတိုဂြိုလ်ကိုရောက်၊ ဂြိုလ်သူမအလန်းလေးနဲ့တွေ့၊ ဂြိုလ်သားဆိုးတွေနဲ့ချပြီး ဂြိုလ်ကြီးကိုကယ်တင်၊ ပလူတိုဂြိုလ်ဘုရင်ကြီးဖြစ်၊ နောက်တော့ ကမ္ဘာဂြိုလ်အပါအဝင် စတြာဝဠာတခုလုံးကို သိမ်းပိုက်၊ စတြာဝဠေးမင်းဖြစ်၊ နောက်ဆုံတော့ သုဂတီဘုံစံ အဆင့်ဆင့်စံစား၊ တရားရပြီး သံသရာမှ လွတ်မြောက်။ ဒန် တန့် တန်…